A na - ekewa anyaji, nke eji eji eriri acha ma obu ihe ndi ozo mee ihe abuo - ihe eji eme ihe na anya na ihe ndi ozo, tinyere ihe na - eme ocha, ubochi mmịcha, sọftụ phthalocyanine, ụcha ọmalịcha, mmịpụta mkpuchi, chụsasịa dyes, ụcha acid wdg.
Pigment bụ ihe eji eme ụcha nke nwere ụcha na ike mkpuchi, nke enweghị ike ịgbari ma ọ bụ kwụsịtụrụ na mmiri, griiz, resin, ihe mgbaze na wdg. A na-ekekọta Pigment ke pigmenti inorganic na pigmenti Organic. A na-ekeji pigmentị pigments na oxide, chromate, sulfate, silicate, borate, molybdate, phosphate, vanadate, cyanates iron, hydroxide, sulfide,
A na-ekeji agba osisi, wdg. A na-ekekwa pigmenti anụ ahụ na pigmenti azo, paịnti phthalocyanine, pigmenti anthraquinone, indigo pigments, Quinacridone pigments, Polycyclic Pigments dị ka oxazine-ⅱ, Fang methane pigments wdg dị ka wuru kemịkalụ ha .;
Industrylọ ọrụ na-eweta akụrụngwa na ọrụ ngo azụmaahịa maka mmịpụta ụcha na ụcha ụlọ;
Anyị na-enye mmepụta ihe ọkụkụ dum, ọrụ injinịa, nrụzigharị ụlọ mmepụta ihe, ọrụ mgbasawanye, ọrụ njikwa njikwa ọrụ, ọrụ aka iji dozie ihe isi ike dị na nsị na ụcha.
Isi akụrụngwa na mmeghe nke ọrụ
Blender: Ejiri maka ịgwakọta ntụ ntụ na ntụ ntụ, ntụ ntụ gwakọtara na obere mmiri mmiri. Maka chaja mmiri mmiri, Industrylọ ọrụ emeberela usoro ịgba nke onwe iji dozie arụmọrụ agwakọta na otu ọ bụla; Ihe igwekota nwere nkọwa zuru oke nke gunyere laabu na ụdị ngwa ọrụ. Varietydị dị iche iche, gụnyere ọtụtụ ngwakọ ngwakọ dịka vetikal na vetikal. Can nwere ike ịhọrọ igwe kachasị adabara dịka usoro mmepụta na akụrụngwa akụrụngwa.
Na-ebugharị: Nkesa pneumatic na-ebugharị (nrụgide dị mma, nrụgide na-adịghị mma, okirikiri na usoro nha) na igwe na-ebu ebu (ịghasa, bọket, eriri na eriri)
Igwe eji agba mmiri: gụnyere sieve na-agbagharị agbagharị, sieve airflow, nkọwa dị iche iche dị.
Ngwa ngwugwu: gụnyere akpa valvụ na igwe mbadamba akpa na-emeghe. Dabere na njuputa, a na-ekewa ya ruo 5kg, ruo 50 n'arọ na akpa akpa.
Ndị na-achụpu: Maka pre-dispersing pigments. Kindsdị dị iche iche na ịkọwapụta bụ nhọrọ ma tinyere Disperser with scraper, Vacum type Disperser, Dual-shaft Disperser with Butterfly agitator, Plas ụdị ụdị mgbasa ozi wdg dị izute ndị dị iche iche mgbasa, agwakọta chọrọ.
Emulsifier dị elu: ejiri ya mee ihe maka ịgbasa agba, imeju, imeghari ya na imezi ya, e kewara ya n'ụdị ụdị na ụdị inline; enwere ike ịhazi ụdị batrị emulsifier ahụ n'ime ụdị kettle agbakwunyere njikọta na ọtụtụ agitators iji nweta otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ; Ememe emulsifier ahu ka eji eme ya, eme ya maka ikpo oku na otutu ndi ozo dika ihe ndi ozo choro.
Ihe nkata na nkata: otu ụdị igwe eji egwu mmiri, ọ na-ejikọsasasị ma na-egweri usoro abụọ n'ime otu igwe. Ọ na - ebelata usoro mmepụta ya na enweghịkwa mgbapụta ma ọ bụ valvụ, yabụ ọ na - eme ka arụmọrụ dị mma ma belata nsị ihe. Na mgbakwunye, ọ dị mfe ịsacha, nke na-eme ka ọ dị mma maka mmepụta ngwaahịa nke ọtụtụ ụdị ngwaahịa dị iche iche na obere olu .;
Kpụrụkpụrụ Anụmanụ: Millinging milling machine na-eji egwe ihe na-achọ ihe dị mma na njedebe ikpeazụ dị elu. Ọ bụ ya na ezigbo egweri utịp na arụmọrụ dị elu. Ọ bụ igwe eji egwe ọka a na-akọkarị n'ahịa gụnyere Disc ụdị Horizontal Beads Mill na gburugburu Hadezontal Beads Mill.
Usoro ahụ dum nwere ike ịbụ njikọta nke igwe dị iche iche ma ọ bụ igwe eji emepụta akpaka na teknụzụ dị elu gụnyere usoro nri ihe, sisitem, ịgbasa ma na-egwe ọka, igwe na-arụ ọrụ na sistem ntanetị, igwe nhicha, usoro nchịkwa akpaka, sistemụ akpaka wdg. dabere na ụdị nchịkọta na ihe nrụpụta chọrọ.